ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက် Mormonism သူကားအဘယ်သူဖြစ်ကြပုံကိုသူတို့နထေိုငျပါသလဲ ကျော်ကြား Mormonism
အဘယ်သူသည်သူတို့ယုံကြည်သောအရာကိုယင်း Mormonism ဖြစ်ကြပြီးဘယ်လိုတစ် Mormonism ဖြစ်လာသလော
ခေတ်ပြိုင်ဘာသာရေးသွန်သင်ချက်များကိုများထဲတွင်ဆဲနိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးဧရိယာ၌အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သောအတော်ကြာလမ်းညွန်, ရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုသိမှရရန်လိုလားသူမည်သူမဆို, ကျနော်တို့ Mormonism ဖြစ်ကြသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အခန်းကဏ္ဍသူတို့သညျလူသားတို့၏သမိုင်းအတွက်ကစားသောသူတို့အားအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူစတင်သင့်ပါတယ်။
Mormonism - ကဘယျသူနညျး
ယောသပ်သည်စမစ်အားဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ XIX ရာစု၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်း created ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှု, အဆုံးစွန်သောနေ့သူတော်စင်သားယရှေုခရစျ၏ဘုရားကျောင်း၏အတွေးအခေါ်များအပေါ်အခြေခံပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ထံမှဖဲ့ခဲ့သည်။ Mormonism အသင်းတော်၏ညှနျကွားအဖြစ်အများအပြားပညာရှင်များအားဖြင့်ဖော်ထုတ်ခံရဖို့ဆက်လက်, ဒါပေမဲ့သူတို့အထွေထွေလယ်ဂျာ, ကျမ်းစာ၌ပါဘာသာရေးကိုင်းအခက်များနှင့်အညီခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ Mormonism - မိမိအသက်၏အဓိကစာအုပ်စဉ်းစားသည်သူတစ်ဦးသောသူသည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့် Mormonism ၏စာအုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ရပ်ရွာမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကအောက်ပါယုံကြည်ချက်ဝေမျှရမယ်:
အဆိုပါဘုရားကျောင်း Call ၏လူ့ဇာတိ ရိုးရာတန်ဖိုးများနှင့်အတူဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ခရစ်ယာန်ဘာသာ။
ရှင်းနေသည်မှာမိမိတို့အဘို့အဖြစ်မှန်မြင်သူ Mormonism နားလည် - ဘုရားသခင့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူမြေကြီးပေါ်လာသောလူများကို။
ပိရမစ်။ လျှို့ဝှက်ချက်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖျံနှင့်ကိန်းဂဏန်းများအဖွဲ့ဝင်များပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည့် Mormonism ၏ပထမဦးဆုံးနိမိတ်တစ်ပိရမစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာရရှိနိုင်ရှေးခေတ်အသိပညာနှင့်မှော်အင်အားကြီးတဲ့အစွမ်းထက်သင်္ကေတလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိရမစ်ထိပ်ကတခြားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ပိုင်ရှင် enable လုပ်ဖို့, စကြဝဠာသို့ညွှန်ကြားနေသည် ယဉ်ကျေးမှု ။
Mormonism အထိမ်းအမှတ်တွေကိုလည်းမှော်အတတ်၏သခင်နှင့်အတူအနီးကပ်လင့်များမှ alludes - က pentagram နဲ့တူလှပါတယ်။
လူအပေါင်းတို့သည်ဒြပ်စင်များ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှု။ Mormonism ထောက်ခံသူတွေသာယရှေုသညျမွကွေီးပျေါကမီး, ရေ, လေနှင့်အီတိုကျခိုကျနိုငျသောယုံကြည်ပါတယ်။
သူမ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုအကြောင်းလူတွေကိုပြောပြရန်ဆန္ဒ။ သိပ္ပံပညာရှင်များ Mormonism, ဘာသာရေးဝါသနာရှင်များ၏ဤယုံကြည်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောသူကိုငါသိ၏။
Mormonism - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်၌ရှိသောသူလည်း?
အဆိုပါ XXI ရာစုနှစ်တွင်အသင်းတော်များ၏နောက်လိုက်များအများဆုံးနိုင်ငံများရှိသူတို့ရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေနဲ့ကုသနေကြသည်ဟူသောအချက်ကိုအတူတက်ထားရန်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာမှတ်သားခြင်းနှင့်ဥပဒေများထဲကတစ်ခုအထက်တန်းလွှာ Gates အမိန့်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏, သင်ကြားမှု၏အယူအဆနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာစုအ 80s ကတည်းက၎င်း၏ထောက်ခံသူများ၏နံပါတ်နှစ်ဆထားပါတယ် - နှင့်ဤသည်အခြားဘာသာတရားအဖွဲ့ဝင်များခြိမ်းခြောက်နိုင်ဘူး။ ယနေ့ Mormonism - မိမိယုံကြည်သူချင်းမှန်မှန်သစ်ကိုပရိတ်သတ်တွေစာအုပ်များစုဆောင်းများအတွက်စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်း, ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များများ၌ရန်ကြိုးစားသောအချက်ကိုသံသယဖြစ်ပြီးသူတစ်ဦး။
Mormonism ၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကောင်းသောဒုစရိုက်, မေတ္တာနှင့်သစ္စာဖောက်၏အခြေခံသဘောတရားများနှင့် ပတ်သက်. အတွင်းကက်သလစ်နှင့်သြသဒေါက်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆင်တူသည်။ ဒါဟာ Mormonism ဘာသာတရားကိုသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြောင်းကိုမေ့လျော့သည်ဤမှာမလိုအပ်ပါဘူး:
ယုံကြည်ချက်၏ဗဟိုဇာတ်ကောင် - ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘတို့ကိုအပြစ်မှလူသားထုရွေးနှုတ်တော်မူယေရှုခရစ်ကိုစေလွှတ်။ ,
အဆိုပါ Mormonism အသက်ရှင်နေထိုင်ရမယ်ဒီတော့ကယ်တင်ရှင်၏သွန်သင်သူတို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်အခြေခံပြီး, အသက်ရှည်သမျှဒေသများလှမျးမိုးပြံ့နှံ့ရပေမည်။
တစ်ခုခုကိုတစ်ယောက်ယောက်ကိုသင်စာအုပ်ကိုဖတ်သည်အထိစစ်မှန်တဲ့ Mormonism, ထိုသို့ပြုမှနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်သူကိုနားလည်ချင်တယ်။
ပညာရေးနှင့် Self-ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ - မရမယ့်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကို, ဒါပေမယ့်လည်းဘာသာတရားတစ်ခုအမှန်တကယ်တာဝန်။
ဘယ်လို Mormonism ရှိပါသလဲ
နေအိမ်သို့၏အဓိကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဤဘာသာတရားများ၏နောက်လိုက်များဖြစ်ပါသည်။ အစွန်းရောက်အသိုင်းအဝိုင်းလူတိုင်းအတွက်အများပြည်သူပွင့်လင်း, မျက်လုံးအသက်နှင့်ခေတ်သစ်ဘုရားကျောင်း prying ကနေပိတ်ထားနထေိုငျအဖြစ်လုံးဝနီးပါးတိုင်းပြည်နယ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း Mormonism ရုပ်မြင်သံကြားတားမြစ်ထားပေမယ့်တက်တက်ကြွကြွအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ငွေရတတ်သောသူသည်ဆင်းရဲသောသူယုံကြည်သူများကိုကူညီရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အထဲတွင်အလွှာသို့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ Stratification, အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ အဆိုပါ Mormonism ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရာအပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးအလုပ်, ပွညျသူပွညျသားစိုက်ပျိုးမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်များစောင့်ရှောက်တာ။
တစ်ဦး Mormonism ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
လူအများစုအသစ်တစ်ခုဘာသာတရားကိုမိတ်ဆက်ခြင်းကမ္ဘာအနှံ့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောသောသာသနာပြုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ တအခြေခံမူနှင့်အတူဝိညာဉျတျော၏နီးကပ်သူတို့ကိုကြားသိခံစားရပါလျှင်သူသည်ဘုရားကျောင်းများ၏ထောက်ခံသူများ၏ရာထူး join ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ Mormonism သုံးခုအခြေအနေများတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြီးနောက်ဘာသာတရားကိုသစ္စာရှိဖို့ဇာတိထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါယုံကြည်အဖြစ်:
Mormonism - တစ်ဂိုဏ်းသို့မဟုတ်မဟုတ်လော
အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက် Mormonism ဂိုဏ်းနှင့်၎င်းတို့၏အပူဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏လိုက်စား၏တာဝန်ရှိသူတဦးကအသိအမှတ်ပြု၏ပြဿနာတွင်တရားအတိုင်းထွက်သယ်ဆောင်။ ထင်ရှားတဲ့ရှေ့နေများနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက Mormonism ယုံကြည်ကြသည် - လူထုများ၏ဝိညာဏ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဂိုဏ်း။ ဒီအခိုင်အမာထောက်ခံကြောင်းခုနှစ်တွင်သူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုအကြောင်းကိုအနည်းငယ်အချက်အလက်များဟု:
ယရှေုခရ - စာတန်၏အစ်ကို။ စာအုပ်အလိုအရ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်အာဏာနှင့်ဘုန်းအသရေဘို့အလောဘကြီးကသူ့အစ်ကို, လူစီဖာကစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
Mormonism ၏ပထမဦးဆုံးအနှစ် 50 အာဒံကိုသွန်သင် - အဘယ်သူ၏ယုံကြည်ထိုက်တန်မှသာဘုရားသခငျ, ။
Mormonism ၏စာအုပ်ရှေးခေတ်ကာလ၏ Chronicles အားဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များဆန့်ကျင်ဘက်သဖွယ်ဖြစ်နေသည်။
အဆိုပါ Mormonism ထက်အန္တရာယ်?
အဆိုပါလူမျိုးရေးအဖြစ်အသင်းတော်များ၏နောက်လိုက်များကိုရည်ညွှန်းသည်ဆိုပါကသူတို့ကကမ္ဘာကြီးကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်သလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ သူတို့ကအသည်းအသန်တခါတရံနီးပါးသူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လူတစ်ဦးအတင်းအကျပ်ဖိအားပေး, အသက်ရှင်ခြင်းအပေါ်သူတို့ရဲ့အမြင်များကိုမြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ ဥပမာ, သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ contents အမည်ပြောင်းအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်အရှက် - အ Mormonism ဘုရားကျောင်းလိမ်လည်စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုနည်းလမ်းများဆန့်ကျင်ဘာမျှရှိပါတယ်။ နေထိုင်ရာသူတို့၏အရပျ၌ယုံကြည်သူများတခါတရံဝတ်ပြုရာအိမ်၏ဆောက်လုပ်ရေးဆန့်ကျင်တဲ့သူဒေသခံများ၏အမြင်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။
Mormonism - စိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အလက်
ကြောင့်ယုံကြည်သူများစပ်စုအိမ်နီးချင်းများနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများအနေဖြင့်သူတို့ဘဝ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖုံးကွယ်ထားရန်ပိုနှစ်သက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်, လူအနည်းငယ်ကလေးတွေ, မိသားစုတန်ဖိုးများနှင့်အခြားဘာသာတရားရိုသေလေးစားမှုတို့ကိုပညာရေးဆီသို့မိမိတို့၏သဘောထားကိုသိကြ၏။ Mormonism အယူဝါဒအလေ့အကျင့်အတွက်တည်ရှိကြောင်းသူတို့ဘဝ၏ထိုကဲ့သို့သောရှုထောင့်ထုတ်ဖော်မပါဘူး:
မယားအမြားယူ။ တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်ဆက်စပ်သောသဘောတရားများ - ယုံကြည်ခြင်း၏နောက်လိုက်ဖဲကြိုးဖြတ်သူတို့နထေိုငျသောနိုင်ငံဥပဒေများကို, ဒါပေမယ့် Mormonism နှင့်မယားအမြားယူလိုက်လျောဖို့ရှိသည်။ ဤလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်တယောက်သောသူ 6-7 မယားများနှင့်ကလေးများ 15-20 နိုင်ပါတယ်။
တခြားဘာသာတရားကျော်ကြီးစိုး။ A ကောင်းဆုံးသာသနာပြုလေးစားမှုအခြားလူများရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပြသရမယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ falsity သက်သေပြနိုင်ဖို့ကြိုးစား။
မသင်မနေရကျမ်းစာသင်ကျောင်းပညာရေး။ 4, ကျောင်းသားများကသူတို့ကိုဘဝလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလေ့လာပါ။
ဥက်ကဋ်ဌ, လက်ဝှေ့သမား, သရုပ်ဆောင်တွေ, အဆိုတော်တွေနဲ့ Royal - ဤအများပြည်သူကိန်းဂဏန်းများအပေါငျးတို့သအမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင် Mormonism ၏စာအုပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားသူတွေနီးပါးတိုင်းအင်တာဗျူးအတွက်သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးဦးစားပေးဖော်ပြခဲ့တဲ့နေချိန်မှာသူတို့ထဲကတချို့က, ဒီယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမှပိုင်ဆိုင်အများပြည်သူထံမှဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မှန်မှန်နိုင်ငံတကာမီဒီယာများကဖော်ပြခဲ့တဲ့သောနာမည်ကြီး Mormonism, တစ်ခုတည်းစာရင်းထဲတွင်တင်ပြနိုင်ပါတယ်:
မင်းသားချားလ်စ်။ ဒါဟာသာသနာပြုအဲလက်စ် Boye သူ့ကိုရွှေနှင့်သားရေ-ခညျြနှောငျစာအုပျကိုပေး၏ပြီးနောက်သူအသစ်တခုဘာသာတရားနှင့်ပြည့်စုံလေ၏သိရသည်။
ရော်နယ်အောင်နိုင်ရေဂင်။ အဆိုပါဟောင်းသမ္မတက၎င်း၏ခေါင်းဆောင်များအများအပြားအရေးကြီးသောနိုင်ငံရေးအရာထူးသိမ်းပိုက်ရာပူဇော်သက္ကာကို, အသင်းတော်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးမျိုးကိုထူထောင်ခဲ့သည်။
Elvis Presley ဆီမှာဆိုရင်။ သူတို့ဘုရင်ကသူ့ကိုခေါ်သောအခါသူကမှန်မှန်, အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းသတင်းစာဆရာများပြတ်တောက်။ ယရှေုခရ - Elvis တစ်ဦးတည်းသာဘုရငျဖွရှိကွောငျးသူတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
လီယိုတော်စတွိုင်း။ Mormonism ရုရှားတွင်အထူးသဖြင့်ဘုံခဲ့ဖူးဘူးနေချိန်မှာကျနော်တို့ကြီးစွာသောစာရေးဆရာဥရောပကနေမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူစာပေးစာယူမှာဆှေးနှေးသောစာအုပ်၏သူ့ကိုယ်ပိုင်မိတ္တူခဲ့ကြောင်းကိုငါသိ၏။
အသင်းတော်များ၏နောက်လိုက်များမရှိသလောက် feature ကိုရုပ်ရှင်သူရဲကောင်းများဖြစ်လာပေမယ့်သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှု၏ပုံပြင်များတခါတရံနေဆဲလူသိများတဲ့ဒါရိုက်တာ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ကျလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Mormonism တရားကိုဟောပြောသောအရာကိုထုတ်ဖေါ်ကြောင်းရုပ်ရှင်များ၏စာရင်း, ပါဝင်သည်:
"မိုဃ်းကောင်းကင်၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်။ " ထိုလုလင်သည်တိုင်းပြည်ကိုကောင်လေးယောဟနျသ Groberg သူ့ဇနီးဂျင်းကနေကွဲကွာခံရခြင်း, တှနျဂါကျွန်းသာသနာပြုရန်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုအထီးကျန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီရန်သူမ၏အက္ခရာများ, သူသည် - ထိုကြှနျးသူကြှနျးနှငျ့ဆကျသှယျ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဝယ်ယူ, သူမ၏ဉာဏ်ပညာကိုဝေမျှပေးသည်။
"ခရစ်ယာန်သာသနာပြုများသို့ပြန်သွားသည်။ " Mormonism သာသနာပြုယာရက် Phelps မိမိအိမျရည်းစားနှင့်မိခင်ကိုစောင့်ဆိုင်းမျှော်လင့်နေတဲ့ဘာသာရေးခရီးစဉ်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးစွဲသည်။ အခြားကလေးနဲ့အတူကိုယ်ဝန်ရှိ - မိမိရောက်ရှိစေရန်, ကချစ်ရာသခင်သည်အိမ်ထောင်သည်ကြောင့်အခြားသောသူနှင့်သူမ၏မိခင်ကိုထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ သူကအသစ်တစ်ခုကိုပိုက်ဆံမပါဘဲအသက်, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ချစ်ရသူကိုစတင်ရန်ရှိပါတယ်။
"ဒီနှစ်အကောင်းဆုံးကိုနှစ်ယောက်" ။ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုများ၏နှစျခုအားလုံးအတွက် Harlem ၏ဆင်ခြေဖုံးတွင်တစ်ဦးငှားရမ်းတိုက်ခန်းမှာနေထိုင်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ထမ်းရွက်မှုကြောင့်အစဉ်အဆက်ခြားနားချက်မှလာမယ့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှမတည်ရှိ။
"သူတို့ကငါ့ကိုသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ Call" ။ Professional ကလူသတ်သမားသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ Mormonism အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ဦးလှူဒါန်းသူအဖြစ်လက်ခံနှင့်ဒေသခံမြေပိုင်ရှင်နှင့်သူ၏ဂိုဏ်းမှာတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေအကူအညီတောငျးတယျ။
"ဂါးဒီးယန်း။ " ပုံမှာယောနသန်သည်စိတ်ပျက်အားငယ်၏ဇာတ်ကောင်ကမိန်းကလေးတစ်ဦး၏ပြည်ခိုင်ဖြိုးကျော်ကြာရှိရာဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းသို့ဝင်ကွာရှင်းပြီးနောက်သူမေတ္တာ၌ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပြန်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
နှေးကွေး schizophrenia - လက္ခဏာများ
သိမှုကုထုံး - နည်းလမ်းများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါကုထုံး၏နည်းစနစ်
အဆိုပါကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်လျော်သောရွေးချယ်ရေးများအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပေးချက်များ - ကိုအကောင်းဆုံးမီးဖိုချောင်ဘို့ကောင်တာကဘာလဲ
ရတဲ့အရာတွေမဂ္ဂဇင်း၏စာမျက်နှာများတွင်မဿဲ McConaughey အဆိုပါထွန်ခြစ်
မင်းသမီးမဂ္ဂီရေ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး Brent Bushnell ကိုလက်ထပ်မယ်
အစိမ်းရောင် Iguana - အိမ်မှာအုပ်စိုးမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
Lively Blake က - ကိန်း 2016
Gelatin မျက်နှာအရေးအကြောင်းတွေနဲ့အတူ mask
ကလေးများအတွက်ဝမ်းလျှော - ကုသခြင်းထက်?
အဆိုတော် Justin Bieber ၏စျာပနအခန်းအနား $ 230 သန်းတန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မည်
အယ်လ်ဘမ် scrapbooking အဘို့အဖုံးအုပ်ထားပါ - မာစတာအတန်းအစား
Brizol - အရသာနှင့်ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာကြက်ဥဟင်းလျာများ
Akureyri - ဆွဲဆောင်မှုများ
© 2021 my.unistica.com